သာသနာ့မြေရေစက်ချပွဲ MRTV4သတင်း
Tuesday, August 20, 2013 at 4:13 pm |
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့၊ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်းဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒောဘာသ ဦးစီ၍ ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာ၌ (၃၂၄၀၀) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းသော ကျောင်းဝိုင်းမြေကြီးကို သာသနာ့ဝတ္တကမြေအဖြစ် ၀ယ်ယူပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤထူးခြားမွန်မြတ်လှသော သာသနိက၀တ္ထုကံ မြေကြီးအလှူရေစက်ချပွဲတော်နှင့် မြေသန့်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ပွဲတော်ကို (၇-၁၂- ၂၀၁၂) နေ့ အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနား၌ ပြည်တွင်းပြည်ပ သာသနာပြု ကမ္ဘာကျော် ဓမ္မကထိက သီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး Read more >>>
Ven. Dr. Nando Batha at Pathein Town
Tuesday, August 20, 2013 at 3:22 pm |
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့၊ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ပဓာန နာယကဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒောဘာသ ဦးစီးပြီး ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာ၌ စတုရန်း ၃၂၄၀၀ ပေ ရှိသော မြေကြီးကို သာသနာ့မြေအဖြစ် ၀ယ်ယူနေရာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့၌ ဒေါ်မြထွေး၊ သမီး လင်းဇာဖြိုးတို့ မိသားစုနှင့် ရွှေသံလွင်ဧည့်ရိပ်မွန် ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းလွင် ဇနီး ဒေါ်ခင်ဝင်းတို့ မိသားစုတို့က ကမကထပြု အလှူငွေများ Read more >>>
Ven. Dr. Nando Batha at Bogalay Town
Tuesday, August 20, 2013 at 2:49 pm |
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့၌ သာသနာ့မြေကွက်များ လှူဒါန်းနေကြပုံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့၊ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်၊ ပဓာန နာယကဆရာတော် ဒေါက်တာ နန္ဒောဘာသ ဦးစီးပြီး ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာ၌ စတုရန်း ၃၂၄၀၀ ပေ ရှိသော မြေကြီးကို သာသနာ့မြေအဖြစ် ၀ယ်ယူနေရာ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဘိုကလေးမြို့နေ ဆရာမ ဒေါ်ကြည်ကြည်စိုး၊ ညီမ မသီတာတို့ မိသားစုနှင့် ပန်းသခင် ဧရပ်မွန် Read more >>>
ရဟန်းဖြစ်ရသောရည်ရွယ်ချက် (၄)ပါး တရားတော်(စတုတ္ထပိုင်း)
Tuesday, August 20, 2013 at 1:45 am |
ဗုဒ္ဓဂယာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တုို့အတွက် ကမ္ဘာ့အမြင့်မြတ်ဆုံး နေရာတော်မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာ၌ ကိုးလ်ကတ္တားမြို့ ဗောဓိသုခပရဟိတမြန်မာကျောင်းဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒောဘာသ ဦးစီးလျက် မဟာဗောဓိပရဟိတမြန်မာကျောင်းတိုက်ကြီးကို ထူထောင်လျက်ရှိရာ ယခုအခါ ဗောဓိရုက္ခမူလ အမည်ရှိ (၅) ထပ်ကျောင်းဆောင်တော်ကြီး ၂ ထပ် ပြီးစီးသွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းကျောင်းဆောင်တော်ကြီး (၂) ထပ်ပြီးစီးသည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျောင်းလွှတ်ပူဇာ ရေစက်ချမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ၅-၁၂-၂၀၁၄ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအခမ်းအနား၌ Read more >>>
တစ်နှစ်နှင့်တစ်လကြာဆေးရုံတက်ပြီးကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသခဲ့ရသော ဦးလှသိန်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Saturday, August 17, 2013 at 9:16 pm |
မေး ။ တကာကြီးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ? ဖြေ။ ဦးလှသိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရား။ မေး။ အသက်ကဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ? ဖြေ။ ၆၈ နှစ်ရှိပါပြီဘုရား။ မေး။ တကာကြီးရဲ့အလုပ်အကိုင်က.. ဘယ်ဌာနမှာလုပ်ခဲ့ပါသလဲ? ဖြေ။ ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှာ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာအဖြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အသက်ပြည့်လို့ အငြိမ်းစားယူလိုက်ပါပြီ။ မေး။ နေတာက ဘယ်မှာနေပါလဲ? ဖြေ။ နေတာက ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင်မှာ နေပါတယ်ဘုရား။ မေး။ တကာကြီးဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တာမြို့ကိုလာပြီး ကျောက်ကပ်အစားထိုးကုသတဲ့နေရာမှာ အချိန်အကြာကြီးဆေးရုံတက်ပြီးကုသမှုကိုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ခြားလူနာတွေက အလွန်ဆုံးကြာရင်သုံးလ၊ လေးလလောက်ပဲကြာပါတယ်။ တကာကြီးက ဘာကြောင့်အဲဒီလောက်ထိ Read more >>>